Cancala Dhangii - Fuula - Gurmeessaa fili
Maqaa haalata filatamee agarsiisa. Haalata maamiloo yoo uumtu ykn haaromsitu,haalataaf maqaa galchi. Maqaa haalata durmurtawaa jijjiiruu hin dandeessu.
Yeroo galmee kee keessatti dhangii kallattii keewwata irratti haalata kana fayyadamuun hojjatte haalata haaromsa. Dhangeessuun keewwatoota haalata kana fayyadaman maraa ofumaan haaromfama.
haalata jiraataa kan haalata ammee galmee kee keessatti hordofuu barbaadde fili. Haalatoota keewwataaf, haalanni itti aanu keewwata yeroo 'Enter' dhiibdu uumame irraatti hojjatama. Haalatoota fuulatiif, haalanni itti aanu yommuu fuulli haaraan uumame fayyada.
Haalata jirataa kan haalata haaraa irratti bu'ureffachuu barbaadde fili ykn , haalata ofii keetin hiikuu yoo barbaadde hin jiruu fili.
Furtuu Qaxxaamuraa Ramadi
Caancala Meeshalee - Maamileessi - Gabatee Cuqoo bakka furtuu qaxxaamuraa haalata ammeetti ittiin ramaduu dandeessu bana.